Tis Mwaka, Google Doodle Inopemberera Kutanga Kwemazororo - ITS
Tis Mwaka, Google Doodle Inopemberera Kutanga Kwemazororo
'Tis The Season, Google Doodle Inopemberera Kutanga Kwemazororo'
Nenguva yacho, google inorumbidza kutanga kweKrisimasi uye Gore Idzva 2016 Krisimasi.
NEW DELHI: Krisimasi, Gore Idzva zviitiko zviri pano uye Google iri kurumbidza chiitiko chikuru neyodhiyo. Google yakabudisa tambo yayo yokutanga 'Tis mwaka! kuti apedze kutanga kweHora Yezororo.
Google Doodle Inopemberera Kutanga Kwemazororo
'Nenguva yenziyo! Nguva yechando inotakura tsika dzakasiyana-siyana, zvisinei kuti vashomanana kana vakwegura kana vanofara sevanoshambadza. Kudzokera shure kwemazana akawanda emakore, nziyo dzokutanga dzakanga dzakanyanyisa kune dzimwe nzvimbo, uye dzakagoverwa nemitambo yekudzivirira pairi inopinda pakati pemataundi. Yakanga isiri iyo pakati peC1800 yekuti chiitiko chekuputira sezvatinozviziva, chakapararira kuEngland neWestern Europe.
Munguva ino, misha yekumaguta yakatanga kutungamira kunze kwemasimba emimhanzi yakaridza mimhanzi yevanhu kuti vasave nayo sezvavakatsvaga.
'Nenguva! ndizvo zvakafananawo kuunganidza mitambo yeKrisimasi naOrivia Newton-John naVince Gill.
Nhasi Doodle inosanganisira boka rinofara revaimbi, rine kateketeti mutambi akagara akasimba kweminiti yake. Panguva iyo muoni anotsvaga mushonga wake pamusoro pemvura yakanaka, anoona shoko rokuti 'Tis the Season uye kuisa pairi rinokutora iwe kudivi rekutsvaga sendimi yakafanana.
Zvimwe zvakafanana nekusingaperi, isu tinokwanisa iye zvino kutarisira kuti Google icharatidza imwe dhizha zuva rega rega, zvinoreva zuva rega rega nguva yekubwinya.
December 23 inoratidzika sezuva guru reKrisimasi inotungamirirwa neKrisimasi neNyika Itsva.
Sezvatinofungidzira zvimwe zvinyorwa zvinoputika vhiki ino, pano ndizvo zvinoda kuti munhu wese anofara Krisimasi uye mamiriro ezvinhu asinganzwisisi ari mberi.
Delhi High Court: WhatsApp Group vatungamiri havatarisi zvezvinhu
Nzira inonyanya kushandiswa yekuderedza Bounce Rate paWe WordPress Site